Shure MV5C, famakafakana lalina momba ny mikropono marobe | Vaovao momba ny gadget
Shure MV5C, famakafakana lalina momba ny mikrô finday marobe
Miguel Hernandez | 22/05/2021 18:00 | General, hevitra
Ny mikrôfôna sy ny webcam any ivelany dia toa zavatra taloha ihany fa ny ankamaroan'ny mpampiasa dia nisafidy ny solosaina finday izay manana ireo fahaiza-manao ireo, ary koa ny fiakaran'ny telefaona finday izay misy mikrô tsara sy tsara kokoa. Na izany aza, "telecommuting", ny firongatry ny streaming sy ny podcasting dia nanova kely ny sainay.
Amin'ity indray mitoraka ity dia miaraka aminay ny mikrô Shure MV5C, mikrô tena be mpampiasa miaraka amin'ny fiantohana marika ekena. Fakafakainay lalindalina kokoa ity mikrô ity, ary lazainay aminao ny hevitra matanjaka indrindra ary mazava ho azy, ny malemy indrindra.
3 Fanandramana amin'ny editor
Nisafidy izay antsoin'izy ireo i Shure tamin'ity indray mitoraka ity Home Office, mikrô izay tsy mikendry mivantana ny vahoaka matihanina fa ny "mpihaino rehetra." Tsy isalasalana fa, ireo antso Zoom lava sy feno olana ireo dia nitarika ireo mpanamboatra an'io karazana kojakoja io hamorona vahaolana marani-tsaina amin'ny olana sasany, zavatra horaisina tsara. Izany no nahaterahan'ity MV5C ity, mikrô for Office Office sy ny kaonferansa video hoy ny marika mitovy. Noho izany, tsy ny hanana hulk mampatahotra eo amin'ny biraonao no safidy tsara indrindra. Shure dia manolo-tena amin'ny minimalism araka ny hitantsika.
lanja: Gramin'ny 160
Manana fitaovana 89 x 142 x 97 izahay miaraka amina loha fisainana boribory tanteraka sy faladiany vita amin'ny alimina borosy izay amin'ny alàlan'ny visy dia hahafahantsika manitsy ny làlan'ny mikrô. Ao ambadik'ity lohan-doha ity dia ho hitantsika ny seranan-tsambo mankany USB sy ny Jack 3,5mm ho an'ny headphone. Etsy ankilany, eo amin'ny faritra ambony dia mivaky ny sary famantarana ny marika sy ny mari-pamantarana LED momba ny toeran'ny mikrô. Mazava ho azy, mila manasongadina isika fa mampiditra tariby USB-A sy USB-C ao anaty fonosana ka tsy tokony hanana olana mifanentana isika.
Manana fitaovana misy valiny ao izahay matetika 20 Hz ka hatramin'ny 20 kHz, ambony lavitra noho ny microphone nentim-paharazana tafiditra ao anaty kahie. Na izany aza, io valinteny matetika io dia azo ovaina ary hiara-miasa a fanerena feo 130 dB SPL. Etsy ankilany, manana mpandika teny condenser izahay ary modely kardioid malaza, amin'ny laharan'ny vokatra ataon'ny Shure matetika. Tsy manana an'izay eny isika, na karazana sivana naoty ambany, ary koa tsy manana tsy fahamaizana sy karazana kapsula azo takalo.
Ny mikrô dia namboarina mialoha hanana valiny fisaka, izany hoe manatsara ny feo indrindra. Saika tsy misy ny fikirakirana, mampifandray mivantana izany Shure MV5C Amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo USB ao amin'ny solosaina finday misy Windows na Mac, misy loharanom-peo vaovao hiseho ao amin'ny drop-down Zoom na Teams, izay mety ho microphone Shure. Tsy manana rindrambaiko azo sintonina (izay notsapainay) ka amin'ity indray mitoraka ity Nifidy plug-and-play i Shure, izay misy dikany raha jerena fa mifantoka amin'ny Biraon'ny trano.
Fanandramana amin'ny editor
Nijoro teo alohan'ny mikrô izahay izay toa tsy hanome zavatra hafa ho antsika amin'ny mikrô an-jatony an'arivony amin'ny fotoana amidy rehetra. Ny tanjony dia ny hanolotra fifandraisana haingana sy haingana, izany no antony Somary nifindra somary nanalavitra ny tontolon'ny matihanina i Shure mba hahatratra mpihaino tena sahirana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ity microphone MV5C ity, an'ny mpampiasa izay manana antso amin'ny alàlan'ny sehatra toa ny Microsoft Teams isan'andro isan'andro. Saingy, i Shure dia nivily lalana tamin'ny fomban-drazana mahazatra azy ireo tsy midika velively hoe nanao ratsy izy ireo.
Na dia tsy manome karazana traikefa ho an'ny mpampiasa tsy mitovy amin'ny an'ny hafa aza ny Shure MV5C dia manana tombony ihany fa amin'ny dingana roa fotsiny dia manao antso na antso an-tsary isika izay handrenesan'ny antoko hafa antsika mazava tsara, tsy misy fanelingelenana na karazana hafa. ny tabataba, izany indrindra no notadiavin'i Shure tamin'ity MV5C, manolora fiantohana sy fitoniana ny valiny omen'ny marika anao, miala amin'ny mpihaino mitady fahasarotana sy fahaiza-manao. Izany no mahatonga ny Shure MV5C azontsika lazaina fa manatanteraka tsara, na mihoatra na latsaka, izay ampanantenainy.
Ny fanontaniana mipetraka izao dia ny hoe tena mendrika ny mandoa ny 105 euro ve ity vidin'ny Shure MV5C ity, fitaovana izay, toy ny sisa amin'ireo vokatra marika, dia manana vidiny somary avo kokoa raha oharina amin'ny fifaninanana. Manana mikrôfôna izahay izay antsasaky ny vidiny ary kely kokoa aza any Amazon ary hanome valiny mitovy amin'izany, na dia tsy hanana antoka momba ny Shure, ny fanohanan'ny Shure na mazava ho azy aza ny famolavolana sy fitaovam-panamboarana voatahiry tsara. Averina indray, ity Shure MV5C ity no mic safidy Home Office mitady ny tsara indrindra.
Navoaka tamin'ny: May 22 amin'ny 2021
Fanovana farany: May 22 amin'ny 2021
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Shure MV5C, famakafakana lalina momba ny mikrô finday marobe
Fire HD 10, ny takelaka Amazon dia nohavaozina matanjaka kokoa sy mamirapiratra
Kobo dia manolotra ny Elipsa vaovao, mpamaky e-feno tanteraka